Isika rehetra dia mahafantatra fa ny mpampiasa matetika mpitsikera, amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna ny mpiasa dia mandika ny zony. Manahy manokana ny amin'ny fanarahana ny zon'izy ireo amin'ny asa ny vehivavy bevohoka sy ny tanora miasa am-bohoka. Raha ny zava-drehetra, ny fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny zaza, ary ny zon'ireo rehetra izay tsy kamo dia ekena. Na izany aza dia hisy ny birao ho an'ny rehetra.
Inona no zon'ny vehivavy bevohoka miasa?
Ny fialan-tsasatra efa hatry ny ela dia 70 andro, ary bevohoka be 84 andro. Ity fialan-tsasatra ity dia omena vehivavy iray noho ny fampiharana azy noho ny toeram-pitsaboana iray (torohevitra vehivavy), izay tarihin'ny reny hoavy. Ary ny fialan-tsasatra taorian'ny fialan-tsasatra dia 70 andro amin'ny fikarakarana ara-dalàna, 86 andro miaraka amin'ny fahasarotana ary 110 andro aorian'ny zaza teraka mihoatra ny 1. Ankoatra izany, ny fialan-tsasatra amin'ny reny dia omena tanteraka an'ilay ramatoa ary voaisa tanteraka. Izany hoe, raha miala sasatra mandritra ny 10 andro ianao fa tsy 70 andro, dia tokony ho 130 andro (70 + 60) aorian'ny fiterahana. Amin'ity tranga ity dia omena tombon-tsoa ara-tsosialy ny vehivavy.
Afaka mangataka fialan-tsasatra hikarakara zaza iray hatramin'ny 3 taona ny reny tanora iray. Ho an'ny fotoana iray manontolo dia omena alalana ny fanjakana ny vehivavy. Mandritra izany fotoana izany, ny vehivavy dia manan-jo hiasa ao an-trano na amin'ny fotoana ifanarahana, ary ny fanomezan-dàlana, ny toeran'ny asa ary ny toerana ho azy.
Ny vehivavy bevohoka dia manan-jo hiala tsy misy faharetan'ny asa fanompoana. Ny fanoloana fialan-tsasatra isan-taona miaraka amin'ny fanonerana vola dia tsy azo ekena.
Ny vehivavy bevohoka tsy avela hiasa amin'ny fepetra mavesatra, manimba sy mampidi-doza, miasa amin'ny alina. Tsy azo atao koa ny miara-miasa. Ny vehivavy miasa fiasa manana zaza latsaky ny 1.5 taona dia tokony homena mihoatra ny 3 ora mandritra ny 30 minitra fara-fahakeliny. Raha tsy irery ny zaza amin'izao vanim-potoana izao, dia tokony ho ora iray farafahakeliny ny faharetan'ny famakiana.
Ny mpampiasa dia tsy afaka mandà hanakarama vehivavy noho ny maha-bevohoka azy. Ny antony handoavana ny asa dia mety ho tsy mifanaraka amin'ny toetra maha-orinasa: ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao, ny fisian'ny mari-pahaizana momba ny fitsaboana amin'ny asa, ny tsy fisian'ny toetra manokana ilaina amin'ny asa. Na izany na tsy izany, ny vehivavy bevohoka dia manan-jo hahazo fanazavana an-tsoratra avy amin'ny mpampiasa momba ny fandavana ny asa. Amin'ny fiafaran'ny fifanarahana asa dia tokony hahatsiaro fa tsy manana zo hametraka fepetra fitsapana ho an'ny reny miaraka amin'ny zaza latsaky ny 1 taona sy ny vehivavy bevohoka ny mpampiasa.
Tsy afaka manala vehivavy bevohoka ianareo, afa-tsy amin'ny famonoana ny orinasa. na dia tapitra ny fe-potoana amin'ny fifanarahana asa, dia tsy maintsy ampitan'ilay mpampiasa izany mandra-pahaterahan'ny zaza.
Fiarovana ny zon'ny mpiasa bevohoka
Raha voahitsakitsaka ny zonao miasa, aza misalasala miaro azy ireo, ny mpampiasa nandika ny lalàna, ilay nanao fandikan-dalàna ary tsy maintsy ho tompon'andraikitra. Ny fiarovana ny zon'ny vehivavy bevohoka dia apetraky ny fitsarana eo an-toerana ny mpampiasa (amin'ny raharaha momba ny famerenana indray amin'ny asa) na ny fitsarana ny fandriampahalemana (toe-javatra hafa mampiady hevitra). Ny fangatahana fitarainana dia takiana ny kopian'ireto antontan-taratasy manaraka ireto: fifanarahana momba ny asa, fandroahana am-bava, fangatahana asa, asa soratra momba ny asa, ary fanamarinana ny habetsaky ny karama.
Azonao atao ny mametraka fanambarana momba ny filazana ao anatin'ny 3 volana amin'ny andro nianaranao (tokony ho nianatra) momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny asanao. Amin'ny toe-javatra mampikorontan-tsaina miaraka amin'ny fandroahana, misy hetsika iray dia napetraka ao anatin'ny iray volana manomboka amin'ny datin'ny fandraisana ny rakitra momba ny asa na ny dika mitovy amin'ny fandroahana. Ny mpiasa voaroaka amin'ny fangatahana ny fangatahana amin'ny famerenana indray amin'ny asa dia tsy mitaky ny sandan'ny fandoavam-bola sy ny saram-pitsarana.
Ahoana no hianaranao manoratra lahatsoratra?
Ny fitaovana ho an'ny asa
Sakafo ho an'ny mpianatra
Toeram-pandehan'ny thermostat ho an'ny fantson-drano
Bao fingotra mangarahara
Folk recipes du health
Nahoana ny tratrako no maratra mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny tantaran'ny andron'ny mpifankatia
Ankizivavy bwonikita mandratra amin'ny zaza
Car Rental (Oman)